Muxuu waqti dheer u qaatay shirka madaxda ee Muqdisho? - BBC News Somali
Muxuu waqti dheer u qaatay shirka madaxda ee Muqdisho?
Axmed Xaji Xasan
3 Nofembar 2017
Madaxda waxay ku shirayaa madaxtooyada Soomaaliya
Madaxda maaamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayuu isbuuc ku dhowaad shir uga socdaa Muqdisho.
Kullanka waxaa diiradda lagu saarayaa qodobo dhowr ah, mana jiro go'aan ka soo baxay ama wax lagu heshiiyay illaa iyo hadda.
Qodobada laga wada hadlayo waaa kuwo aad u culus oo u baahnaa in horey loo sii diyaariyo, sida uu sheegay Guleed Salax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Haddaba maxay tahay caqabadaha hor taagan in shirka uu dhammaado?
Amniga iyo ciidamada
Soomaaliya waxaa ka jiro caqabado dhanka amniga ah. Labadii isbuuc ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay qaraxyo waawayn.
Qarixii Soobe ee 14-kii bishii Oktobar waxaa ku dhintay in ka badan 350 qof. Madaxweyne Farmaajo ayaa weerarkaas ku eedeeyay ururka Al-Shabaab.
Ciidamadii ugu dambeeyay waxaa soo tababar Imaaraatka
Guleed Salax oo ka tirsan machadka cilmi baarista ee SIDRA oo fadhigiisu yahay Garowe ayaa sheegay in arrinta amniga iyo qaab dhismeedka ciidamada ay yihiin waxyaabaha ugu waawayn ee laga doodayo.
"Waxay u baahnayd in hurmar laga sameeyo arrinta amniga. Markii wax lagu heshiiyo waaa in la qaado tallaabooyiin muuqda," ayuu yiri Guleed oo la hadlay BBC-da.
"Amniga waxaa hortaagan oo dib u dhac ku keenaya jawiga guud ee siyaasadeed ee cakiran oo saameyn ku leh horumaradii la sameyn lahaa," ayuu hadalkiisa ku daray Guleed Salax.
Dowladda ayaa bishii May, London ku saxiixday heshiis lagu dhisayo ciidamo gaaraya 18,000, kuwaas oo min 3,000 laga kala keeni doono dowlad goboleedyada. Waxaa kale oo ka mid ah in dib u habeyn lagu sameeyo talisyada kala duwan ee ciidammada.
Todobo arrimood oo Farmaajo u sheegay Soomaalida
Taariikhda madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo
Farmaajo: Dagaalka Al-Shabaab aan u midowno
Ciidamdaas waxaa laga kala keeni doonaa gobollada dalka, waxayna ka wada qeybgali doonaan la dagaallanka Al-Shabaab iyo in ay amniga gacanta ku qabtaan.
Kala shakiga iyo wada shaqeynta
Xigashada Sawirka, MADAXTOOYADA JUBBALAND
Golaha Kismaayo ee maamul goboleedyada
Tan iyo markii uu bilowday khilaafka ka dhashay arrinta dalalka Khaliijka, waxaa sii kordhayay kala shakiga soo kala dhexgalay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadatay go'aan dhexdhexaad ah oo ku aadan khilaafka u dhexeeya dalalka Khaliijka. Wadammo uu hoggaaminayo Sacuudiga ayaa go'doomiyay dalka Qadar.
Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in ay taageerto go'aanka Sacuudiga iyo dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ayna xayiraad saarto Qadar.
Guleed Salax ayaa sheegay in "jawigaas oo ka horeeyay shirka uu yahay mid aan saamaxayn in si fudud heshiis loo gaaro."
Markii hore waxay ku billaabatay kala aragti duwanaan, balse waxay u gudubtay khilaaf rasmi ah oo sababay in maamul goboleedyada qaar ay gilgishaan.
Machadka SIDRA, warbixin soo saaray ayuu ku sheegay in boqolkiiba 61 shacabka Soomaaliya ay taageersan yihiin go'aanka dhexdhexaadka ah ee dowladda dhexe qaadatay.
Markii Madaxweynihii hore ee Hirshabelle xilka laga qaaday iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay Galmudug, madxada maamullada waxay isugu tageen Kismayo waxayna cambaareeyeen dowladda Soomaaliya iyo "faragelinta ay ku hayso maamullada".
Daawo: Qorshaha Farmaajo ka dib weerarkii Soobe
Shirka Muqdishu wuxuu dhacayaa ayadoo weli uu taagan yahay kala shakigaas soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamullada, sida uu sheegay Guleed Salax, madaxa machadka cilmi baarista ee SIDRA.
"Kala shakiga badan iyo xiriirka oo xumaaday, ee soo jiray mudooyiinkii ugu dambeeyay, waxay keenayaan in is afgarad degdeg ah la gaari waayo," ayuu yiri Guleed.
"Waxay ila tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada la yimaadaan hannaan wada shaqeyn oo yarayn kara khilaafka markasta soo kala dhexgala labada dhinac," ayuu ku taliyay madaxa SIDRA.
Madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay diideen shir ku saabsan arrimaha dastuurka oo bishii la soo dhaafay ka dhici lahaa magaalada Muqdisho.
Dowladda federaalka ayaa looga fadhiyaa in ay dhameystirto dastuurka oo qabyo qoraal ah. Balse haddii aysan taageero ka helin maamullada goboleedyada way ku adkaaneysaa in la dhameystiro.
Waxaa dastuurka ka mid ah qodobo dhowr ah oo la isku hayo sidii wax looga bedeli lahaa, waana arrimo horey looga wadahadalay.
Xigashada Sawirka, Radio Muqdisho
Shirka Muqdisho ka socda
"Maamul goboleedyada waxay ka cabanayaan in wadatashiyo aan lagala yeelan isbedello lagu sameeyay dastuurka," ayuu yiri Guleed Salax oo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda.
Qodobada 53-aad iyo 54-aad ayaa horey u sababay khilaaf, waxaana soo kala xigtay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo qeyb ka ahaa arrinta cirka ku shareertay khilaafka Khaliijka ee gilgilay Soomaaliya.
Bishii June maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale kasoo horjeedstay xeerka isgaarsiinta qaranka oo golaha wasiirada meelmariyeen, waxayna maamulada sheegeen in dowladda federaalka ay hareermartay waxyaabihii horey looga heshiiyay ee xeerkan ku saabsanaa oo dhan.
Madaxweyne Farmaajo maka dhabeyn doonaa ballanqaadkii uu sameeyay?
Muxuu dhigayaa sharciga isgaarsiinta ee madaxweyne Farmaajo uu saxiixay?
Sida muuqata, maamul goboleedyadana ku doodayaan, isfaham darrada ugu badan waxa ay salka ku haysaa dastuurka oo ay sheegayaan in uusan kala qeexeyn awoodaha.
Guleed Saalax ayaa ku taliyay in la kala cadeeyo qodobada dastuurka ku qoran ee khilaafka sababa, si Soomaaliya ay horey ugu socoto.
Dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxay kala kulantay caqabado badan, dhismaha maamul goboleedyada.
Maamullada oo dhan waxay dhismeen ayadoo la isku khilaafsan yahay, marka laga reebo Puntland oo la dhisay 20 sano ka hor.
Guleed Saalax wuxuu sheegayaa in horumarinta hannaaanka federaalka uu yahay qodob ka mid ah kuwa u baahan in si wanaagsan looga doodo, heshiisna laga gaaro.
Dowladda dhexe ayaa horey loogu eedeeyay faragelin ku hayso maamullada, "ayna sabab u ahayd xil ka qaadista madaxda qaar," sida ay ku doodeen hoggaamiyayaasha maamullada.
Madaxda shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa bishii la soo dhaafay ku shiray magaalada Kismaayo waxayna dhisteen gole ay ku mideysan yihiin.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka did markii golaha la dhisay, ayaa si taxadar leh loogaga hadlay shirkii Kismaayo.
"Degdegga golaha Kismaayo lagu dhisay iyo waxa ay qabanayaan ee la sheegay, waxaa ka asalsan kala fogaanshaha dowladda federaalka iyo maamullada. Marka waa muhiim in la gaaro xalka madmadowga markastaa soo kala dhexgalo" ayuu yiri Guleed Salax.
Qeybsiga qayraadka dalka
Madaxda maamullada qaar ayaa dhaliilay sida dowladda federalka ee Soomaaliya wax uga siiso mashaariicda horumarinta iyo dhaqaalaha.
Sida uu sheegay Guleed, Arrintan waxay ka mid tahay qodobada u baahan in heshiis dhab ah lagaga gaaro shirka Muqdisho ka socda oo weli uusan ka soo bixin go'aan dhab ah oo lagu heshiiyay.
Golaha Kismaayo waxay dowladda u jeediyeen eedeyn
"Maamul goboleedyada waxay marwalba ka cabanayeen in dowladda dhexe ay isku koobto deeqaha caalamka laga helo," ayuu yiri madaxa machadka cilmi baaridda siyaasadda ee SIDRA, Guleed Salax.
Soomaaliya waxay weli ku tiirsan tahay deeqda caalamiga ah, balse maamul goboleedyada ayaa doonaya in ay garab ka helaan dowladda dhexe oo dhankeeda weli raadineysa mushaarka ciidamadeeda.
26-dii May ee sanadkan 2017-ka, maamul goboleedka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeyay heshiis xagga badda ah oo shirkado kalluumeysi lagu siiyay shatiyo.
Khilaafka Khaliijka iyo siduu u kala qaybiyay Soomaaliya
Soomaaliya siyaasad noocee ah ayay u baahan tahay?
Guleed ayaa sheegay in lafagur badan lagu sameeyo qodobada ka hor intaan shirka la isugu imaan, si aysan waqti badan u qaaban heshiisyada laga gaarayo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa la dhisay siddeed bilood ka hor, waxayna wajeheysaa caqabo dhanka "amniga iyo siyaasadda ah".
Sida wararka ay sheegayaan, maanta ayaa la filayaa in go'aan ugu dambeeya uu ka soo baxo kullanka Muqdisho uga socdo hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka.
Maamul goboleedyada Soomaaliya oo diiday xil ka qaadista Xaaf
27 Sebtembar 2017
Kismaayo oo lagu dhisay gole ay ku mideysanyihiin dowlad goboleedyada
11 Oktoobar 2017
Waa kuma madaxweynaha xilkiisa lagu muransan yahay ee Xaaf?
3 Oktoobar 2017
Axmed Madoobe: "Farmaajo wuxuu doonayaa doorasho boob ah"
17 Abriil 2021
Tirada dhimashada Covid-19 oo kor u dhaaftay 3 milyan
20 sano kadib maxaa laga dhaxlay duulaankii ciidamada reer galbeedka ee Afghanistaan?
Lix arrimood oo u gaar ah aaska Amiir Philip
Maxkamad Hindiya ku taalla oo xukmisay in haweeneyda Muslimadda ah ay furi karto ninkeeda
Ninka Soomaaliga ah ee ka cararay UK kaddib ka baxsaday booliska Hindiya oo maxkamad u wada
Xaguu ku dambeeyay laadarka weyn ee ka tagay Bollywood-ka?